लकडाउन असारदेखि के के खुल्ने र के के बन्द हुन्छन् ? यस्तो तयारी गर्दै छ सरकार ! हेर्नुहोस् ;(भिडियो सहित) – List Khabar
Home / समाचार / लकडाउन असारदेखि के के खुल्ने र के के बन्द हुन्छन् ? यस्तो तयारी गर्दै छ सरकार ! हेर्नुहोस् ;(भिडियो सहित)
लकडाउन असारदेखि के के खुल्ने र के के बन्द हुन्छन् ? यस्तो तयारी गर्दै छ सरकार ! हेर्नुहोस् ;(भिडियो सहित)
admin4days ago समाचार Leaveacomment 1,408 Views
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको को-भिड– १९ सङ्क्रमणको गति मुलुकमा क्रमशः न्यून हुँदै गएपछि सरकारले निशेषाज्ञालाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजाने योजना अघि सार्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर जारी गरिएको नि-शेषाज्ञाको आदेश कार्यान्वयन र सङ्क्रमणको अवस्थाबारे समीक्षा भइरहेकोे र त्यसैका आधामा असारदेखि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराको निक्र्योल हुने जनाइएको छ । गृहप्रवक्ता जनकराज दाहालले
सङ्क्रमणभन्दा निको हुने दर दोब्बर हुँदै गएको र मृ-त्यु दरसमेत न्यून भएकाले नि-षेधाज्ञामा केही खुकुलो गर्ने योजनाका साथ अहिले काम भइरहेको छ । आ–आफ्नो जिल्लामा आदेश लागू गर्ने र हटाउने अधिकार सरकारले प्रजिअलाई नै दिएकाले गृहको आवश्यक समन्वय र निर्देशनमा काम अघि बढ्नेछ ।
को-रोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा तथा को-रोना परीक्षणको दायरा वृद्धि भएसँगै पछिल्लो दिन सङ्क्रमितभन्दा निको हुने दर उच्च हुँदै गइरहेको तथ्याङ्कल देखाएको छ । सोमबार झण्डै १८ हजारको परीक्षण गरिएकोमा चार हजार ४७२ मा सङ्क्रमण पुष्टि भएको र छ हजार ९५१ सङ्क्रमित निको भएका छन् ।
सोही अवधिमा को-रोनाबाट ९२ जनाको मृ-त्यु भएको छ । त्यसअघि १८ हजारको परीक्षणमा कम्तिमा पनि आठ हजारमाथि सङ्क्रमित फेला पर्दै आएका थिए । मानिसको मृ-त्यु तीन अङ्कको थियो ।को-रोनाको पहिलो लहरमा जारी गरिएको बन्दाबन्दी एक्कासी खोल्दा सङ्क्रमणले गति लिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गृह प्रवक्ता दाहालले यसपाली भने त्यो गल्ती नदोहोरिने स्पष्ट पार्नुभयो । उनका अनुसार आवश्यकताका आधारमा विस्तारै खुकुलो पार्दै लगिने छ ।
मुख्यतः कृषि कर्मको बेला भएकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिने योजना छ । दाहालले भने, ‘दैनिक जनजीवनसँग जोडिने कुरा प्राथमिकतामा पर्छन्, वर्षाको समय छ, मल बीउ, कृषि कर्म, अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, सामग्री ओसारपसार र विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने तर पूर्णस्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा भने कडाइ गरिनेछ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनमा ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी खटिएको बताउछन्। अझै पनि मानिस आफ्नो स्वास्थ्यका लागि सचेत नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रहरी देखे मात्रै मानिस सचेत हुने त्यसपछि लापरवाही गर्ने क्रम कायम रहेको बताए । चिकित्सकले आफू बाहेक सबै को-भिड सङ्क्रमित हो भनेर व्यवहार गर्न नागरिकसँग अनुरोध गरिरहेका छन् ।
Next भर्खरै आयो सारा देशवासीलाई अत्यन्तै खुसीको खबर।
सानो छदा आकाशमा प्लेन भन्दै उफ्रने म ,आज आफन्त र हजुरहरुको आशीर्वाद र मेरो मेहनतले …